I-China Start Battery, Abakhiqizi, Abahlinzeki, Intengo - Shenzhen Li DE You Technology Co LTD © Copyright 2020-2021 LiFePO4 Power Technology Co. LTD
Ikhaya > Imikhiqizo > Qala ibhethri
12V 40Ah Lithium ion Izithuthi Ibhethri Lemoto
Impilo Yomjikelezo Omude: Inikela ngempilo yomjikelezo ophindwe izikhathi ezingama-20 futhi iphindwe kahlanu lifeoat / impilo yekhalenda kune-lead acid battery, isiza ukunciphisa izindleko zokufaka esikhundleni futhi inciphise izindleko eziphelele zobunikazi. isisindo sebhethri yomthofu eyi-lead. Ukufaka esikhundleni 'ukwehla' kwamabhethri e-acid okuhola.
I-12Volt 100Ah Ibhethri Yezinjongo Ezihamba Phambili Yezinjongo Zokuqala Zesikebhe
Amabhethri e-Lion 12V 60Ah ajulile aphezulu akalwe ngemoto ukuqala
LiFePO4 12V 80Ah Stop-Start Car Amabhethri
Asibona nje abakhiqizi be- Qala ibhethri abaqeqeshiwe kepha futhi besilokhu sihlinzeka ngezinsizakalo zokuhweba zangaphandle selokhu kwasungulwa inkampani. Sineqembu elihamba phambili nensizakalo, sicela usikholelwe.Siyisithengisi sebhethri esinenzuzo enkulu yamanani.Ku- Qala ibhethri, ​​singenza kangcono.